2018-08-06 03:27:46 46
Okwedlule： Indawo Yokuphila Eyisisekelo uNkulunkulu Ayenzela Isintu——Amazinga okushisa nokubanda
Okulandelayo： Indawo Yokuphila Eyisisekelo uNkulunkulu Ayenzela Isintu——Ukukhanya
Okusanhlamvu, izithelo nemifino, kanye nazo zonke izinhlobo zamantongomane konke kungukudla kwabantu abadla imifino kuphela. Yize kungukudla kwabadla…
Kwakukhona umfudlana omncane ozombeleza uye uphinde ubuye, ekugcineni ufinyelele ekuqaleni kwentabakazi. Intaba yayivimbe indledlana yomfudlana omncan…
... Kungani uNkulunkulu eyahlukanise ngale ndlela? Lokhu kubalulekile kubo bonke abantu—kubalulekile impela! UNkulunkulu wehlukanise imikhawulo ngokohl…
Yini into yesihlanu? Le nto ihlobene kakhulu nempilo yawo wonke umuntu, futhi yinto leyo umzimba womuntu ongeke uphile ngaphandle kwayo kule lizwe el…